Nanangana Sehatra Ho amin’ny Mangaraharan’ny Firenena i Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2016 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, русский, Deutsch, عربي, Español
Pikantsarin'ny Sehatra Vaovao Mangaraharan'ny Firenena ao Meksika.
Fitaovana vaovao manampy amin'ny fampiroboroboana ny zo hahazo vaovaom-panjakana sy ny mangarahara ao Meksika ny Sehatra ho an'ny Mangaraharan'ny Firenena ao Meksika. Ny vavahadin-tserasera dia ahafahan'ny olona rehetra manana aterineto hahazo vaovaon'ny fitondram-panjakana efa vonona, na fangatahana lahatahiry mbola tsy tafiditra.
Navoakan'ny Ivo-toeran'ny Fangaraharam-pirenena, Fahazoam-baovao Sy Fiarovana ny Lahahirin'ny Tena Manokana tamin'ny 6 Mey 2019 ny Sehatra ho amin'ny Mangaraharan'ny Firenena, izay misahana ny fiantohana ny zo fototra hahazo torohay avy amin'ny sampandraharaham-panjakana ao Meksika. Nantsangana ity vavahadin-tserasera ity noho ny fanitsiana mampiadi-hevitra tamin'ny lalàmpanorenana momba ny mangarahara ao amin'ny firenena (jereo ny tatitra teo aloha tao amin'ny Global Voices Advox), ary ankehitriny, ahitana adidy ara-dalàna vaovao ho an'ireo antoko politika sy sendika mba hiantohana ny mangarahara amin'ny vaovaon'izy ireo, ankoatra ireo olana maro hafa .
Óscar Guerra, iray amin'ireo mpandrindra fito ao amin'ny Sehatra ho amin'ny Mangaraharahan'ny Firenena, naneho hevitra hoe:
Ohatra tsara indrindra amin'ny fampiharana ny teknolojiam-baovao eo amin'ny fanatanterahana sy fampiasana ny zon'ny tsirairay ity sehatra ity. Ho fanovozan-kevitra ho an'ireo firenena rehetra mikatsaka hampandroso vahaolana elekitronika mitovy amin'izany izy ity mba hanamorana sy hiantohana ny zon'ny fahazoam-baovao.
Tsy midika anefa izany rehetra izany fa nihatsara ankehitriny ny fahazoam-baovao momba ny fitondram-panjakana any Meksika. Nanomboka tamin'ny taona 2002, raha natsangana ny Ivo-toerana Federaly ho amin'ny Fahazoam-baovao sy ny Fiarovana Lahatahiry (IFAI), izay efa tsy misy intsony ankehitriny, nisy ny vavahadin-tserasera antsoina hoe INFOMEX izay nahafahan'ny olona rehetra manana aterineto (tsy mijery izay toeram-ponenana na zom-pirenena) nangataka fanazavana maimaim-poana avy amin'ny sampan-draharaha federaly. Ireo izay niditra tao amin'ny vavahadin-tserasera dia afaka miantso ny IFAI mihitsy aza raha toa ka tsy voavaly ny fangatahan'izy ireo na tsy mifanaraka amin'ny fangatahan'izy ireo ihany koa ny vaovao nomena. Angamba ny ohatra tsara indrindra amin'ny tena ilàna ny rafitra tahaka izao dia tamin'ny taona 2005, raha nangataka ny olom-pirenena ary nahazo niditra tao amin'ny tahirin-kevitry ny fanadihadiana mikasika ny raharaha Ayotzinapa, izay mpianatra 43 no niharan'ny fanjavonana sy famonoana olona faobe.
Anisan'ny zava-baovao mampiavaka ny sehatra vaovao ny fanasongadinana ahafahan'ny mpiserasera manamarina ny tenan'izy ireo mba hahafahana miditra amin'ny alalan'ny fampiasana kaonty tambajotra sosialy tahaka ny Twitter sy Facebook. Natao mba ho azo hidiran'ny olona manana filàna manokana ihany koa ny sehatra. Amin'ny dingana manaraka, ho azo idirana amin'ny alalan'ny finday raitra sy ny tablety mampiasa fampiharana finday ny sehatra.
Raha vao am-perinasa tanteraka ny Sehatra Ho an'ny Mangaraharan'ny Firenena, dia natao ho mpiara-dia matanjaka iadiana amin'ny kolikoly ao Meksika. Saingy mbola ho hita eo ny fahombiazany rehefa tanterahina izany.